သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကနည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ – JobDescriptionSample
Home / သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကနည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ Functions များ
superadmin June 28, 2016 Uncategorized Leaveacomment 12 Views
ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က Operate (MRI) ရုပ်ပုံများ. လူနာလုံခြုံရေးနှင့်နှစ်သိမ့်စောင့်ကြည့် . သွေးကြောသွင်း Gadolinium ဆနျ့ကငျြဘသောက်သုံးသောဆပ်မယ်. နေကြပါတယ်ရပ်တည်ချက် MRI နည်းလမ်းများသုံးသပ်တွင်, အားဖြင့်ကရှင်းပြသည်တစ်ဦးချင်းစီကိုအင်တာဗျူးစေခြင်းငှါ, နှင့်တည်နေရာလူနာ. ထိုကဲ့သို့သောလူနာအမွေအနှစ်အဖြစ်ကွန်ပျူတာဒေတာတွေကိုဝင်နိုင်ပါစေ, alignment ကိုသတ်မှတ်ထားသော, ဇီဝဒေသ Scan ဖြစ်လာဖို့, နှင့်ဝင်ရောက်ခြင်း၏တည်နေရာ.
ဇီဝကမ္မခြေရာခံခြင်း suffereris လက်စေပါတယ်ကပ်, ကိုယ်ထည်, ခါး, ကိုယ်ခန္ဓာ၏သို့မဟုတ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Adjust (MRI) ယူနစ်သို့မဟုတ်ရံဟာ့ဒ်ဝဲ.
contraindications သိရှိနိုင်ဖို့လူများ၏စိစစ်အင်တာဗျူးလုပ်ဆောင်သွားရန်, ခြေတုလက်တု pacemakers ဖြစ်ကြောင်းဥပမာ ferrous ပစ္စည်းများအဆို့ရှင် .
ကို Workstation သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုမီဒီယာမှကွန်ပျူတာကနေဂရပ်ဖစ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်ဓါတ်ပုံများ၏ backup လုပ်ထားမိတ္တူထုတ်လုပ်ရန်.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ရှင်းပြပါ (MRI) တစ်ဦးချင်းစီမှနည်းလမ်းများ, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ကြောင်းဖြန့်ဖြူး, သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုဝင်များ.
အရောင်များကိုနှိုငျးယှဉျသွေးကြောသွင်းထည့်ပါ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့် Gadolinium ဆနျ့ကငျြဘအဘို့အဖြစ်, အညီအလေ့အကျင့်၏ setting နှင့်အတူ.
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့် ပတ်သက်. ဓာတ်ပုံများ Check, ကင်မရာနှင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကာကွယ်မှု devices တွေကိုအသုံးချဖို့.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က Perform (MRI) စကင်နာ.
ဆန္ဒရှိပါက, ဖြစ်ခြင်းသင့်လျော်သောတည်နေရာရွေ့ယူနစ်သေချာစေရန်, ကိုင်ပေါ်ရာအရပျခံစားနေရသူများကပူးတွဲ.
ဒုက္ခခံစားခဲ့ရကြောင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်နိမ့်အသံမြှင့်တင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီမှ supply earplugs သို့မဟုတ်ဟက်.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဆက်စပ်ရှုပ်ထွေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ troubleshoot (MRI) စာဖတ်သူကိုသို့မဟုတ်ရံထုတ်ကုန်, နာရီသို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းအပါအဝင်.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့သို့မဟုတ်သင်ယူသူအကြံပေး (MRI) လုပျထုံးလုပျနညျးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများလုပ်ထုံးလုပ်နည်း.
အစွမ်းထက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ optical နည်းလမ်းများ function (MRI) ဓာတ်ပုံတွေ, ဥပမာအားလက်တွေ့ကျတဲ့ဦးနှောက်-ပုံရိပ်, Real-time ခန္ဓာကိုယ်ရွေ့လျားမှု-ခြေရာခံခြင်း, သို့မဟုတ် musculoskeletal ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ် visualization.
ထိတ်လန့်သို့မဟုတ် claustrophobia နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဆရာဝန်များအနေဖြင့်ဝယ်လိုအား sedatives သို့မဟုတ်နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ.
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Check (MRI) လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအချို့သောသင့်လျော်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုဖြစ်စေ tools များ.
ဇီဝဝယ်ယူလက်ကိုင်ဖို့ဇီဝပံ့ပိုးမှုများကိုလင့်ထားသည် (PAC) ထုတ်ကုန်.
ရာထူးနှင့်အနည်းငယ်သာ protected, moveable သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်စာဖတ်သူများ image ဖြစ်လာဖို့, ထိုကဲ့သို့သောလက်မောင်းအဖြစ်, ဒူး, သို့မဟုတ်သွားရ.
လက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ် client များနှင့် ပတ်သက်. အစီအစဉ်အစည်းအဝေးများ.
အလုပ်-related စာတမ်းများအတွက်နားလညျမှု-နားလည်ခြင်းရေးစပ်အပိုဒ်နှင့်စာကြောင်း Reading.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားလူတပြင်လုံးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုပေးဟုဆိုဘယ်အရာကို, အဆိုပါအချက်များအသိအမှတ်မပြုဖို့အချိန်ယူပြီးထုတ်လုပ်လျက်ရှိ, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းမေးခွန်းများကို, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာလမ်းပြနေမဟုတ်.
မဟာဗျူဟာ-Pick သင်ယူခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာကိုပညာပေးသို့မဟုတ်အသစ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာနေသည့်အခါတငျပွ educationORtutorial မဟာဗျူဟာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု..
အေဂျင်စီများ၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-OverseeingPERDiscovering စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကုစားအရေးယူစဉ်းစားပါသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများဖန်တီးရန်.
လူမှု othersA တုံ့ပြန်မှုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့် သိ..
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ဖော်ထုတ်ခြင်းရှုပ်ထွေးအခက်အခဲများနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အကဲဖြတ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
အသုံးပြုသူကူညီပေးဖို့အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-ရှိခြင်း devices များသို့မဟုတ် Generating နှင့်နည်းပညာလိုအပ်ပါတယ်.
Tools များတဲ့အလုပ် execute ဖို့လိုအပျရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ကြင်နာ.
အရစ်ကျ-Installing applications များ, စက်, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
ကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက် programming-Writing ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
function ခြေရာကောက်-လေ့လာခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စံအတိုင်းအတာ, သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများအနေနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများထိရောက်စွာဖျော်ဖြေနေသည်သေချာဖြစ်.
စစ်ဆင်ရေးနှင့်နည်းလမ်းများသို့မဟုတ် devices များထိန်းချုပ်ရေး-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလုပျထုံးလုပျနညျး.
ကို Maintenance-ကွပ်မျက် tools များအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခါဆုံးဖြတ်ခြင်း.
operating နှင့်အကြောင်းအဘယ်သို့ပြုရမည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှားများကိုနောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ကိုစူးစမ်းအချက်များ.
ဆန္ဒရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. ပြင်ဆင်ခြင်း-ပြုပြင်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းအကဲဖြတ်-ပွုလုပျခွငျးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများ, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့.
အဆိုပါ setting ကိုအတွက် analysis-ကိုစူးစမ်း program တစ်ခုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုနှင့်မည်သို့အပြောင်းအလဲများ, စစ်ဆင်ရေး, အဖြစ်ပြဿနာများရလဒ်များ impact နိုင်ပါတယ်.
နည်းလမ်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းသည့်စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်လည်းစနစ်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ, သင့်လျော်သောသို့မဟုတ် performance ကိုခိုင်မာစေရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ရပ်များ.
ဝင်ငွေအလုပ်ပွုပါပွီဖို့အသုံးခံရဖွယ်ရှိသည်မည်မျှငွေ-ဖော်ထုတ်ခြင်း၏အုပ်ချုပ်ရေး, ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ကုန်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ-လေ့လာသူများစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များမှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုမှလေးလည်း, ပစ္စည်းကရိယာ, အထူးသဖြင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ operate.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-Creating ၏အုပ်ချုပ်ရေး, တွန်းအားပေး, သူတို့လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့ရှေးရှေးဦးဆောင်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အကောင်းဆုံးလူတွေကိုဖော်ထုတ်.
Affiliate ရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-နှစ်ဒီပလိုမာ)
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, အထိ2နှစ်နှင့်အပါအဝင်,
အောင်မြင်မှု / လုပ်ငန်း – %
တည်မြဲခြင်း – %
စီမံခန့်ခွဲမှု – %
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – %
အခြားသူများများအတွက်ပြဿနာ – %
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – %
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – %
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – %
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – %
အနက်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – %
ရိုးသားခြင်း – %
လွတ်လပ်ခြင်း – %
သစ်လွင်မှု – %
analytical အတွေးအခေါ် – %
တိုက်ရိုက်နှင့်ပြင်ဆင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နှင့် muffins ငါးပြင်ဆင်နေ, အသား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, …